ISKAASHIGA DADWEYNAHA( WAALIDKA) IYO DARIFYADA AMNIGA(BOOLISKA) CAASIMADA EE KU WAJAHAN DHALINYARADA FALAAGOWDAY | Saxil News Network
ISKAASHIGA DADWEYNAHA( WAALIDKA) IYO DARIFYADA AMNIGA(BOOLISKA) CAASIMADA EE KU WAJAHAN DHALINYARADA FALAAGOWDAY
Sida aynu lawada socono waxaa baryahan dambe ka taagnaa Caasimada Somaliland ee Hargeysa Rabshado ay wadeen qaar kamid ah dhalinyarada kuwaas oo ku kici jiray dhaqano fool xun oo ay kamid ahayd Qaaducu-dariiq oo ay u gaysan jireen Dadweynaha kala duwan ee ku nool xaafadaha kala duwan ee caasimada. Iyada oo Hayadaha amniguna ay mar walba heegan ugu jireen sidii ay uga hortagi lahaayeen ficiladaa foosha xun ay ku kacayaan dhalinyaradu.
Haddaba, shirar isdaba jooga ay soo qabanqaabisay wasaarada Arimaha Gudaha dhawaan islamarkaana ay qayb ka ahaayeen Cuqaasha iyo intabadan Waalidiinta caasimadu waxaa lagu heshiiyey in inanka dhalinyaradaa ka midka ah oo isagoo ku gudajira falalkaa aynu sare kusoo xusnay ay ciidamada amnigu ay dilaan inaan cidna loo raacin.
Go’aankaa lawada qaatay waxa uu keenay in Ciidamada Amniga iyo guud ahaan waalidiintii caruurahoogu ku foognaayeen falalka inuu dhexmaro iskaashi iyo wada-shaqayn qiimaha leh oo dhaliyey natiijo lagu diirsado, islamarkaana in si wadajir ah looga wada hawlgalo ama haddii aan dhinac kale ka eegno in ay waalidiinta dhalinyaradoodu ka mid tahay ay iyaguba si toos ah usoo qabqabtaan oo ay kadibna booliska kusoo wargaliyaan si wadajir ahna loo soo wada katiinadeeyo .
Muuqaalkan aanu saaka 11 March 2015 kasoo qaadnay dhalinyaro si wadar ahaan loosoo wada ka tiinadeeyey oo la keenay maxkamada Hargeisa iyaga oo ay horkacayaan dhamaan waalidiintii dhalay Rabshad-wadayaashaa halkan ka dheehda.